संविधान संशोधन विधेयक तत्काललाई थाँति राखौं - Karobar National Economic Daily
संविधान संशोधन विधेयक तत्काललाई थाँति राखौं
query_builderDecember 25, 2016 11:46 AM supervisor_account visibility4671
धनराज गुरुङ, केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद, नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् धनराज गुरुङ । व्यवस्थापिका संसद् सदस्यसमेत रहेका गुरुङ सरकारले हतारमा छलफल नै नगरी दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव तत्काललाई थाँती राखेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । राजनीतिक सहमति विना मुलुक अघि बढ्न नसक्ने भएकाले सहमति बिना संशोधन पास हुन नसक्ने उनको दाबी छ ।
संशोधन विधेयकले मधेसी र पहाडे भन्ने भावनाको उजागर गरेको उनको निष्कर्ष छ । संशोधन विधेयक नेपाली नेताको गोजीबाटभन्दा पनि कुनै विदेशी नेताको गोजीबाट आएको हो की भन्ने उनको आशंका छ । उनी संशोधन थातीँ राख्ने, अनि राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्वाचनतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
संशोधनमा अल्झिँदा संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने र दलहरूकै अडानका कारण संघीय गणतन्त्र नेपालमाथि ग्रहण लाग्न सक्ने बताउँने नेता गुरुङसँग संविधान संशोधन विधेयक, संविधान कार्यान्वयन, अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाअभियोगलगायतका विषयमा केन्द्रित रही तीर्थराज बस्नेतले गरेको कुराकानी:
संविधान संशोधनको विषयले अहिलेको राजनीतिलाई अल्मल्याएको छ । सरकारले संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछिको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
संविधान संशोधन विधेयक एकाएक आयो । कुनै अभ्यास र गृहकार्य नगरी, दलहरूबीच सहमति विना नै संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । असन्तुष्ट मधेसी दलका लागि भनेर ल्याइएको तर, तिनै दलले समेत कन्टेनमा हाम्रो चित्त बुझेको छैन भन्ने गुनासा गरिरहेका छन् । प्रतिपक्षसँग पनि कुनै समझादारी नभएको अवस्थामा विधेयक दर्ता गरियो ।
संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो । सम्झौता हुनका लागि सहमति हुनुपर्छ । सहमतिबाट बनेको संविधानलाई विमतीबाट संशोधन गर्न सकिँदैन । मुख्य कुरा यही । अहिले मुलुक संशोधनकै विषयमा अल्झिएको छ । संविधान संशोधनका नाममा मुलुक अल्झिँदा संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।
संविधान कार्यान्वयन हुन सकेन भने गणतन्त्रनै खतरामा पर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसमा सवै दल सजग हुन जरुरी छ । दलहरूको आफ्नै कार्यशैलीका कारणले गणतन्त्रमाथि ग्रहण लाग्न हुँदैन । मैले देख्दैछु हाम्रै अबुझ परिपाटीका कारण संघीय गणतन्त्र नेपालमाथि नै ग्रहण लाग्न सक्ने सम्भावना प्रवल छ ।
सरकार संविधान संशोधन विधेयक टेवल गराउने पहलमा छ । तर प्रतिपक्षीहरूले फिर्ता लिनुपर्ने अडान बारम्बार दोहो¥याइरहेका छन् । अब संशोधन प्रस्ताव टेवल हुन्छ या फिर्ता हुन्छ ?
सरकारले जवरजस्ती ढंगले हतारमा संशोधन प्रस्ताव ल्याएको हो । प्रतिपक्षले संशोधन प्रस्ताव टेवल गर्न दिँदैनौ भनेर संसद् अवरोध गरिरहेका छन् । विगतमा पनि धेरै पटक संसद् अवरोध भएका छन् । त्यस्तो अवस्थामा सहमतिकै माध्यमबाट संसद्को अवरोध हटेका छन् । त्यसैले राजनीतिमा सहमतिको संस्कार हुर्काउन जरुरी छ ।
किनभने, समानुपातिक र समावेशी भनेर हामीले जुन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनायौं । र, यस्तो अवस्थामा सधैं सहमतिको राजनीति आवश्यक पर्छ । अहिलेदेखि नै हामीले बनाएको प्रणालीअनुसार सहमतिको अभ्यास गरेनौं भने यो काम नलाग्ने हुन्छ । सिस्टम एक प्रकारको बनाउने र आफूचाहिँ अर्को ढंगले हिँडेर काम छैन भन्ने लाग्छ ।
त्यसैको परिणाम हो अहिले एमालेले संशोधन टेवल गर्नै दिन्न भन्नु । अहिले सरकार र प्रतिपक्षीले अहिले जसरी आ–आफ्नो जवरजस्ती गर्न खोजेका छन् । यसले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन । क्षणिकरूपमा कसैलाई फाइदा होला तर, दीर्घकालीनरूपमा नेपाली राजनीतिलाई यसले एकदमै ठूलो नोक्सान पुर्‍याउँछ ।
त्यसकारणले जवरजस्त ढंगले संशोधन अघि बढाउँछु भन्ने सरकारको ढिपी र प्रतिपक्षले पनि कुनै पनि हालतमा अघि बढाउन दिन्न भन्ने ढिपी अन्त्य गरे मध्यमार्गी बाटो अपनाउनु आजको आवश्यकता हो । त्यहीबाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ ।
विपक्षी दल तथा सत्ता पक्षकै केही नेताहरूले संशोधन प्रस्ताव विदेशी शक्तिको इशारामा ल्याइयो भन्ने गरेका छन् । यहाँलाई के लाग्छ ?
संशोधन प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि मधेसी नेताहरूलाई लैनचौर दरबारमा निम्ताइयो । र, निर्देशन दिइयो की यो संशोधनको पक्षमा उभिनु भनेर । यो कुरा हेर्दा संशोधन प्रस्ताव कुनै नेताको कोटको खल्तीबाट नभएर कुनै विदेशी नेताको कोटको खल्तीबाट आएको हो की जस्तो देखिन्छ ।
यतिमात्रै होइन भारतको विदेश मन्त्रालयको हवाला दिँदै भारतीय राजदूवासले विज्ञप्ति पनि निकाल्यो । त्यो विज्ञप्ति संशोधन प्रस्तावको पक्ष आएको थियो । यसरी हेर्दा यो नेपाली राजनीति माथिको हस्तक्षेप मात्रै नभएर नेपालको राष्ट्रियतामाथिको हस्तक्षेप नै हो भन्ने मैले ठानेको छु । त्यतिबेला पनि मैले विदेशीको ठाडो हस्तक्षप हो भनेको थिएँ ।
यी परिघटनालाई हेर्दा संशोधन प्रस्ताव हामीले हाम्रो हो भनेर अपनत्व गर्ने ठाँउ म देख्दिन । संशोधनले पहाडे र मधेसी भन्ने भावनालाई उजागर गर्ने काम गरेको छ । जबकी हामी सदियौंदेखि पहाडे, मधेशी मिलेर बसेका थियौं र फेरी पनि मिलेरै बस्नुपर्छ । तर, यो संशोधनलाई हेर्दा पहाडे र मधेसीबीच तिक्तता बढाउन खोजेको छ । पहाडे र मधेशीमा विभक्त हुने गरेर संशोधन विधेयक आउँछ भने यो राष्ट्रियताको हितमा हुँदैन ।
पाँच नम्बर प्रदेश विभाजनको विषयलाई लिएर आन्दोलन भइरहेको छ । त्यो आन्दोलनमा प्रतिपक्षी त सहभागि छन् नै त्यो सँगै सत्तापक्षकै नेताहरू पनि सहभागि छन् नि ?
संशोधनको विषयमा पार्टीभित्र छलफल नै भएन । संसदीय दलमा पाँच नम्बर प्रदेशका माननीयहरूलाई राखेर प्रस्ताव दर्ता गर्ने ठीक अघिल्लो दिन छलफल भएको रहेको । त्यहाँ प्रतिपक्षलाई समेत सहमतिमा ल्याएर मात्रै संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने भन्ने भएको रहेछ । अघिल्लो दिन त्यस्तो निर्णय गर्ने र त्यसको भोलिपल्टै संशोधन दर्ता गरिएको छ ।
यसले के देखाउँछ भने नेपाली कांग्रेसभित्र पनि यथेष्ठ छलफल भएन । हामीले केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि संशोधन गर्ने भए पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ भनेका थियौं । सहमतिबाटै संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने सांसदहरूको विचारलाई लत्याएर एकाएक संशोधन विधेयक जसरी आयो यसले कांग्रेस पार्टीभित्र छलफल हुन सकेन ।
छलफल हुन नसक्नु र पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाड छुट्टाइएकाले विरोध भएको हो । पहाडे र मधेशी एक ठाउँमा बसे राष्ट्रियता बलियो हुने हो । मधेसी, पहाडी, केही जातको नाममा छुट्याउन खोज्नु गलत हो । त्यसैले विरोध भएको हो । अहिले भाषासम्बन्धी व्यवस्था प्रस्टरूपमा उल्लेख छ । संविधानको धारा ६ ले सवै मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषा मानिने छ भन्ने प्रस्टरूपमा भनेको छ ।
धारा ७ को उपधारा १ मा देवनागरिक लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने त्यो पनि प्रस्ट छ । उपधारा २ मा नेपालीबाहेक अन्य भाषालाई पनि प्रादेशिक सरकारी कामकाजको भाषा प्रादेशीक कानुन बमोजिम मान्न सकिने छ भन्ने छ । भाषा आयोग गठन पनि भइसकेको छ । अहिले आएर भाषाको किन किचलो झिक्ने ?
नागरिकताका विषयमा पनि प्रष्ट छ । यो विषयमा यती लचिलो व्यवस्था अन्य देशको संविधानमा देखेको छैन । भारतको संविधानमा छैन । अंगिकृत नागरिकता बोकेको मान्छेलाई यो मुलुकको कार्यकारी बनाउने भन्ने कुरा मान्य हुँदैन । अहिले सुरक्षा निकायको प्रमुख, प्रदेश सभाको प्रमुख, मुख्यमन्त्रीलगायतका संवेदनशील पदमा अंगिकृत नागरिकलाई लैजानुपर्छ भन्ने विषयमा सहमत हुने ठाउँ छैन ।
उसो भए संशोधन विधेयक अघि बढाउनु हुँदैन भन्ने यहाँको विचार हो ?
सहमतिबाट जारी भएको संविधानमा विमतिका साथ संशोधन विधेयक अघि बढाउने अवस्था आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन । यदि त्यो अवस्था आयो भने मेरो पद भन्दा देश ठूलो हो, जनता ठूलो हो । त्यसैले मलाई पदप्रतिको आशक्ति छैन म यथास्थितिमा संशोधन विधेयकलाई समर्थन गर्न सक्दिन ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि अबको १३ महिनाभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नु पर्नेछ । तीनै तहको निर्वाचनको सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमाथि ग्रहण लाग्ने खतरा मैले देखिरहेको छु । त्यसैले अहिले राजनीतिमा देखिएको गाँठो फुक्न जरुरी छ । मधेशी दलको नाममा लैनचौर दरबारमा भोज खाँदै सधैं संविधानको विरोध गर्न मिल्छ ? ९० प्रतिशत नेपाली जनताका जनप्रतिनिधीले सही गरेको संविधान हो यो ।
यसको कार्यान्वयनको क्रममा समस्या भयो र आवश्यकता देखियो भने संशोधन गर्दै जाउँला । तर, लैनचौर दरबारको निर्देशन बमोजिम उफ्रनेहरूका लागि, अंगिकृत नागरिकता खल्तीमा राखेर उफ्रनेहरूका लागि संविधान संशोधन हुन सक्दैन । त्यसैले कार्यकारी अधिकार लिएकाहरूले आँट गरेर तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ ।
अहिले स्थानीय तह निर्धारण अयोगले बुझाउन लागेको प्रतिवेदनलाई स्विकार गरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानुपर्छ । केही कमिकमजोरी रहेछन् भने सुधार गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न मान्नुभएन भन्ने कुराहरू आएका छन् । प्रधानमन्त्रीले आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न नमानेर हुन्छ ? जो सुकै सत्तामा हुन् यस्तो नौटंकी गर्न पाईंदैन । सत्तामा हुनेले ठीक काम गर्नु पर्छ, सत्तामा हुनेले नेपाल र नेपालीप्रतिको इमान्दारिता सधैं देखाउन सक्नुपर्छ ।
तर, मधेसी दलले संशोधन विना निर्वाचन गर्न खोजिए निर्वाचन हुनै नदिने बताइरहेका छन् । कसरी हुन्छ निर्वाचन ?
मधेसमा २÷४ जिल्लामा निर्वाचन गर्न असहज होला । मलाई त्यस्तो हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन । त्यस्तै परे सुरक्षाकर्मी खटाएर पनि चुनाव गर्नुपर्छ । मुलुकलाई यसरी अड्काउन पाईंदैन । मधेसका रैथाने जनताका लागि मधेसी दलले आन्दोलन गरेकै होइनन् । यो त खाली अंगिकृत नागरिकता बोकेका नेताका लागि संविधान घाँडो भएको हो ।
संविधानको धारा २८९ मा लेखियो की विषेश पदहरूमा जानका लागि बंशज नागरिकता चाहिन्छ । त्यसैप्रति उनीहरूको ठूलो आपत्ति हो । मधेशी दलका धेरै जसो नेताहरूको अंगिकृत नागरिकता रहेछ । उनीहरू त्यही अंगिकृत नागरिकता भएका र मन्त्री बनिसकेकाहरूले हामी मुख्य मन्त्री बन्न नपाउने हो कि भन्ने टाउको दुखाई हो ।
उनीहरूले प्रत्यक्ष त भनेका छैनन् तर, घुमाउरो भाषामा यही कुरा भनिरहेका छन् । त्यसैले २÷४ नेताका लागि देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्न सकिँदैन । निर्वाचन नगरी बस्ने कुरा हुँदैन । निर्वाचन रोक्नु भनेको संविधान कार्यान्वयन हुन नदिनु हो । संविधान कार्यान्वयन हुन नदिएपछि मुलुकको राजनीतिक कोर्स नै चेन्ज हुनसक्छ ।
एमालेले संसद अवरोध गर्दा अख्तियारका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाअभियोगको प्रस्तावमा छलफल हुन सकेको छैन । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनुभन्दा पहिले संसद्मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गर्ने मध्येको तपाईं पनि एक हुनुहुन्छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
हामीले जुन सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थियौं । त्यतीखेरै त्यो प्रस्ताव छलफलमा लैजानु पथ्र्यो । तर, त्यो भएन । फेरी महाअभियोगको प्रस्ताव आएको छ । यो प्रस्तावमाथि पनि तत्काल छलफल गरेर निर्णय गरी महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको भए यसरी रोकिने थिएन । लोकमानले गरेका घृणित कार्यहरू दुनियाँलाई थाहै छ ।
उनले आफूलाई संविधानभन्दा माथि देखाए । अदालतले म्याद टाँस्न जाँदा टाँस्न नदिने र संसदीय समितिले बोलाउँदा उपस्थित नहुने । उनले संसद् र कानुनभन्दा माथि देखाउने प्रयत्न गरे र त्यही हर्कत काफि छ की उनीमाथि महाअभियोग पास हुनुपर्छ । यसलाई अघि बढाउन सक्नु पथ्र्यो । यसले सिंगो संसद्माथि जनताको निराशा पैदा हुन पनि सक्छ । संसद्मा हामीले गरिरहेका कामकारबाही माथि जनता सन्तुष्ट छन् भन्ने मलाई लाग्दैन ।
कांग्रेसले अहिलेसम्म महाअभियोगको विषयमा किन स्पष्ट धारणा ल्याउन नसकेको हो ?
यस विषयमा हाम्रो केन्द्रीय समितिमा छलफल भयो र त्यहाँ हामीले भनेका थियौं एउटा निर्णय लिनुपर्छ । राष्ट्रिय विषयमा राष्ट्रिय दलले आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्ट पार्न सक्दैन भने त्यो दल जनताको विचमा कहाँ रहन्छ ? गाह्रो हुन्छ । अहिले कांग्रेसी केही नेताहरूले अल्मल्याउने तर्कहरू दिन्छन् । कोही कोही लोकमान बचाउ अभियानमा पनि होलान् ।
सबै छैनन् फेरि । कोही कोहीलाई लागेको होला पार्टीले निर्णय नगर्दा राम्रो । तर, जनता के भन्दैछन् भने लोकमान भनेको गलत मान्छे हो र महाअभियोगको विषयमा किन कांग्रेसले निर्णय लिन सकेन भन्न परेको छ । कांग्रेसले राष्ट्रिय विषयमा स्पष्ट निर्णय लिन जति ढिलो गर्छ उती पार्टीलाई नोक्सान हुन्छ ।
त्यसकारणले कांग्रेसले यस विषयमा निर्णय लिन अलमल गर्नु कमजोरी हो । त्यस्ता कमजोरी नदोहो¥याउनका लागि हामीले नेतृत्वलाई सुझाइरहेका छौं । कांग्रेसभित्र म जस्तै महाअभियोगलाई समर्थन गर्ने धेरै हुनुहुन्छ । कोही नउभिए पनि धनराज गुरुङ उभिन्छ । पार्टी पनि यही ठाँउमा उभिनुपर्छ र उभिन्छ ।
लोकमान सिंह कार्कीलाई सर्वोच्च अदालत परिसरमा कालो मोसो दलियो । त्यसको केही समयपछि कार्कीले विज्ञप्ती जारी गरेर नेताहरूलाई निकै कडा शब्दमा चेतावनी दिएका छन् । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अपराधीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने हो । अपराधीलाई सडकमा कारवाही गरियो भने यो मुलुक वेथितीयुक्त बन्छ । त्यसैले जतिसुकै अपराधी हुन् । अपराधीहरूलाई कसैले पनि कालोमोसो दल्ने लगायतका कार्य गलत हुन् । कालोमोसो दलेका कारणले अब लोकमानले उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने पनि होइन ।
कालोमोसो दलेको आधा घण्टा पनि नबित्दै लामै वक्तव्य आएको छ र नेताहरूलाई ठूलो आरोप लगाइएको छ । यसरी हेर्दा उनी वदलाको भावनाबाट प्रेरित भएको देखिन्छ । यही वदलाको भावनाबाट प्रेरित भएका कारणले पनि उनले राम्रो काम गर्न सकेनन् । उनले आरोप लगाउँदैमा नेताहरू आरोपित हुँदैनन् त्यसको प्रमाण चाहिन्छ । कुन नेताले के अनियमितता गरेको छ भनेर देखाउनुपर्छ ।
फाइल कहिलै नदेखाउने, लुकाएर राख्ने अनि आरोप मात्रै लगाउने कति जायज हो ? लडाकु शिविरकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यो फाइल ३ वर्षसम्म घर्रामा राख्ने अनि त्यसपछि आफ्नो नियुक्तिको फाइल अदालतले खोज्दा पत्रकार सम्मेलन गरेर छानबिन गर्छु भन्ने यो त ब्लाकमेलिङ होइन र ? त्यसैले यो वक्तव्य पनि यस्तै ब्लाकमेलको एउटा अंश हो ।
संशोधन, निर्वाचन, महाअभियोगलगायतका विषयमा मुलुक अल्भिएको छ । यी सबै विषयको निकास के हुन सक्छ ?
विमतिका कारणले राजनीति गाँठो परेको हो । संसद्मा कुनै पनि पार्टीको दुइतिहाई बहुमत छैन । त्यस्तो अवस्थामा हामीले समस्या थप्ने होइन । देखिएका समस्या हल गर्न एक हुने हो । पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्त बुझेर त्यही बमोजिम निर्वाचन तयारी गर्ने र यो संशोधन विधेयक हाललाई थाँति राख्ने ।
किनभने, सहमतिको जगमा बनेको संविधान विमतिका बीच संशोधन हुन सक्दै सक्दैन । त्यसैले यो थाँति राख्नुपर्छ । यती हुने वित्तिकै अनिर्णयको बन्दी बनेको मुलुक निर्णयतर्फ उन्मुख हुन्छ । र, लोकमानसिंह कार्की जस्तो यो मुलुकको बेथिती, विकृति, विसंगतिका नाममाथि दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव पनि पास गर्नुपर्छ । यसरी नै सबै विषयको हल हुन सक्छ ।
नेपाली जनताले पटक–पटक राजनीतिक व्यवस्था फेरे । तर, नेपालको अवस्था चाहिँ किन फेरिन सकेन ?
नेपालको अवस्था फेरिन नसक्नुको एउटै कारण छ । त्यो हो हामीले राजनीतिक व्यवस्था पटक–पटक फेर्‍यौ तर, राजनीतिक संस्कार फेर्न सकेनौं । हिजोको कुनै एउटा व्यवस्था चलाउनेहरू जति लोभी पापी थिए त्यतिकै लोभ र पाप हामीले पनि बोकेर आयौं । हामी र संस्कार नबदलिएपछि देश र समाज कसरी बदलिन्छ ? भूकम्प प्रभावित च्यातिएको पालमुनी बस्ने र हामी सांसदहरू आफ्नो तलवभत्ता वृद्धि हुनुपर्छ भन्ने कुन संस्कार हो ? के हामीले चाहेको नयाँ नेपाल यही हो ? नेपाली जनताले चाहेका सांसद यस्तै हुन् ? होइन, हामी गलत बाटोमा गइसक्यौ । हामी पहिले बदलिनुपर्छ अनि मात्रै देशको अवस्था बदलिन्छ । नेपाली जनता उपचार अभावमा आत्महत्या गरिरहेका छन् ।
नेताहरू राज्यकोषमा हालिमुहाली गर्ने ? अनि कसरी नेपाल परिवर्तन हुन्छ ? कसरी समृद्धि बन्छ ? राजनीतिक संस्कार बदलिन नसक्नुनै नेपालको अवस्था नफेरिनुको प्रमुख कारण हो । नेपाल बदल्न राजनीति आफ्ना लागि नभएर देश र जनताका लागि गर्न सकेको खण्डमा नेपाल चाँडै समृद्ध हुन्छ । लोककल्याणकारी राज्यका रूपमा नेपाललाई अघि बढाउँदै समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख हुने हो भने केही वर्षमै नेपाल समृद्ध हुन सक्छ । भष्ट्राचार रोक्ने र भष्ट्राचारीलाई तत्कालै कारबाही गर्ने र सामाजिक बहिस्कारको परिपाटी पनि बसाउन जरुरी छ । हाम्रो संस्कार कस्तो छ भने मन्त्री भएपछि यहाँ नक्कली सम्पति विवरण बुझाउने चलन छ ।
हाम्रै अबुझ परिपाटीका कारण संघीय गणतन्त्र नेपालमाथि नै ग्रहण लाग्न सक्ने सम्भावना प्रवल छ । अहिलेदेखि नै हामीले बनाएको प्रणालीअनुसार सहमतिको अभ्यास गरेनौं भने यो काम नलाग्ने हुन्छ ।
तर, यहाँ मन्त्री भएपछि त्यो नक्कली सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्नुभन्दा अधिकृत तहभन्दा माथिको कर्मचारी, सवै राजनीतिक दलका नेताहरू, संसद, प्रदेशको मुख्य मन्त्री, प्रदेशको माननीय सदस्य, संघीय संसद्का विधायकदेखि राजनीतिक खास–खास व्यक्तित्वहरू, गाउँपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुखसम्म सम्पति विवरण सँधै सार्वजनिक गर्ने परिपाटी बसायौं भने पनि यसले समाजमा फलानोको सम्पति कति भन्ने प्रश्न कम हुन्छ । त्यसो भयो भने पनि भष्ट्राचार न्यूनीकरण हुन्छ । साथै भष्ट्राचारीलाई सामाजिक बहिस्कार गर्नु पर्छ । भष्ट्राचारी हो भन्ने अनि फूलमाला लगाउँदै प्रमुख अतिथी बनाउने परम्परा छ हाम्रो मुलुकमा । त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ ।
अनिश्चित बन्दै तीन तहको निर्वाचन
२०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानअनुसार २०७४ माघ ७ गतेभित्र ३ तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने छ । तर, अबको १३ महिनामा ३ तहको निर्वाचन हुने सम्भावना ज्यादै कम रहेको सत्तारुढ दलकै नेताहरू बताउँछन् । सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कार्ययोजना ल्याउन नसक्दा निर्धारित मितिमा तीन तहको निर्वाचन हुने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ ।
सरकारले चैतमा गर्ने भनी घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन नहुने सम्भावना प्रबल बन्दै गएको छ । स्थानीय तह निर्धारणका लागि गठन गरिएको आयोगले सरकारलाई बुझाउन लागेको प्रतिवेदन सरकारले बुझ्न आलटाल गरिरहेको खबर सार्वजनिक भएका छन् । त्यसले के बुझ्न सकिन्छ भने चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन नहुने सम्भावना बढाएको छ । आयोगको प्रतिवेदन नबुझ्ने र दलहरूबीच निर्वाचनका लागि सहमति नजुट्ने हो भने २०७३ सालभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन नहुने निश्चित प्रायः छ ।
भूकम्प प्रभावित च्यातिएको पालमुनी बस्ने र हामी सांसदहरू आफ्नो तलवभत्ता वृद्धि हुनुपर्छ भन्ने कुन संस्कार हो ? के हामीले चाहेको नयाँ नेपाल यही हो ?
अर्कोतिर मधेस केन्द्रित दलहरू आफूहरूले उठाएका माग सम्बोधन नभई स्थानीयसहित कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताइरहेका छन् । उनीहरूले संशोधन विना निर्वाचन हुन नदिने बताइरहेका बेला माग सम्बोधनका लागि सरकारले संसद्मा संसोधन विधेयक त दर्ता गराएको छ । तर, विधेयकका विरुद्धमा आन्दोलनसमेत भइरहेका छन् । एमाले लगायतका विपक्षी दलहरू र सत्तारुढ दलकै केही नेता संशोधनको विपक्षमा उभिएका छन् ।
संशोधन विना निर्वाचन हुन नदिने मधेस केन्द्रीत दलको अडान र संशोधन हुनै नदिने प्रतिपक्षको अडानका कारण निर्वाचनलाई प्रत्यक्षरूपमा नकारात्मकरूपले प्रभाव पार्छ । मधेस केन्द्रित दल र प्रतिपक्षको अडानका कारण निर्वाचनको मुद्धा थप पोचिलो बन्दै गएको छ । चैतमा गर्ने भनिएको स्थानीय निर्वाचनको कार्यतालिका प्रभावित हुँदा प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन पनि धकेलिने छ ।
परिघटनालाई हेर्दा संशोधन प्रस्ताव हामीले हाम्रो हो भनेर अपनत्व गर्ने ठाँउ म देख्दिन । भाषा आयोग गठन पनि भइसकेको छ । अहिले आएर भाषाको किन किचलो झिक्ने ?
यसरी निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुन नसके संविधान कार्यान्वयन थप असहज हुने देखिन्छ । तर, सत्तारुढ र प्रमुख प्र्रतिपक्षी दल आफूले राखेको अडानबाट तलमाथि नभए त्यसबाट आउने परिणामका बारेमा खासै गम्भीर देखिएका छैनन् । संविधान कार्यान्वयन गर्दै तोकिएकै समयमै निर्वाचन गरेर राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नु राजनीतिक दलको जिम्मेवारी हो ।
तर, उनीहरू आ–आफ्नै दलीय संकीर्ण स्वार्थमा नै रुमल्लिरहेका छन् । मधेस केन्द्रित दल, सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले आ–आफ्नो अडानमा लचक भएर सहमतिको मध्यविन्दु पहिल्याउनु नै अहिलेकै आवश्यकता हो । यदि दलहरू आफ्नो अडानमा लचक नहुने र सहमतिमा नपुग्ने हो भने निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुँदैन र जसका कारण संविधान कार्यान्वयनसमेत हुँदैन । त्यसैले दलहरूले लचकता अपनाएर राजनीतिक सहमति गरेर निर्वाचनको दिशा तर्फ उन्मुख हुन जरुरी छ ।
संशोधन विधेयक र संविधान कार्यान्वयन
मधेस केन्द्रित दलको माग सम्बोधनका लागि भन्दै सरकारले मंसिर १४ गते व्यवस्थापिका संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरायो । सरकारले संशोधन विधेयक दर्ता गराउने वित्तिकै उक्त विधेयकको विरुद्धमा अहिले आन्दोलनसमेत भइरहेका छन् । खास गरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलगायतका विपक्षी दलहरूले संशोधन विधेयकलाई राष्ट्र हित विपरित भनिरहेका छन् ।
स्वयं सत्तारुढ दलकै केही नेताहरू संशोधन प्रस्ताव विदेशी शक्तिको इशारामा ल्याएको भन्दै आन्दोलनमा छन् । पाँच नम्बर प्रदेश विभाजनको विषयलाई लिएर विभिन्न ठाँउमा आन्दोलन भइरहेका छन् । संशोधन विधेयकमाथि छलफल हुन नदिन एमालले संसद्मा अवरोध गरिरहेको छ । साथै एमालेले संसोधन विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह समेत गरिरहेको छ । तर, सरकारले भने विधेयक फिर्ता नलिने बताइरहेको छ । मधेशी मोर्चाले पनि सरकारलाई संशोधन विधेयक चाँडो अघि बढाउन भनिरहेको छ । विधेयकका कारण मुलुकको राजनीति गाँठो परेको छ ।
मधेशी दलको नाममा लैनचौर दरबारमा भोज खाँदै सधैं संविधानको विरोध गर्न मिल्छ ? कांग्रेसले राष्ट्रिय विषयमा स्पष्ट निर्णय लिन जति ढिलो गर्छ उती पार्टीलाई नोक्सान हुन्छ ।
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र संशोधनको पक्षमा छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, नेकपा मालेसहित केही साना दल यसको विपक्षमा देखिएका छन् ।
खास गरी संविधान संशोधन नभई निर्वाचन हुन नदिने मोर्चाको अडान, २०७४ माघ ७ भित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने सरकारको बाध्यात्मक अवस्था र संशोधन हुनै नदिने प्रतिपक्षको अडानका कारण मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । नेपाली जनताको लामो समयको प्रतिक्षापछि आफ्ना प्रतिनिधीले लेखेको संविधान त पाएका छन् । तर, संविधान कार्यान्वयन हुनेमा भने ढुक्क हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक दलका आ–आफ्नै अडानका कारण संविधान कार्यान्वयनमा आशंका बढाएको छ । यदि राजनीतिक दलहरू लचक नहुने र सहमति नगर्ने हो भने संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।
मेरो गोरुको बाह्रै टक्का छाडेर दलहरूले आ–आफ्नो अडानबाट केही लचक भएर मध्यविन्दु पहिल्याउन आवश्यक छ । जसका कारण संविधान कार्यान्वयन हुन सकोस् । संविधान कुनै दल विषेशको भन्दा पनि सवैको साझा दस्तावेज हो भन्ने चेत राजनीतिक दलमा आउन जरुरी छ । जसका कारण संविधान कार्यान्वयनमा संविधान निर्माता र संविधानसँग असन्तुष्ट सबै प्रतिबद्ध हुन सकुन् । त्यसैले सवै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आएर संविधान कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान सामुहिक प्रतिबद्धताको खाँचो छ ।
नेपाली कांग्रेस संविधान संशोधन व्यवस्थापिका संसद्